Uqeqesho kunye neMveliso
Usale kakuhle neentloni
Thetha kancinci, yithi ngaphezulu
Bhukisha intlanganiso yeqhinga
Impumelelo yakho sele ikuwe ...
Intlonipho ngamandla omlingo enza imimangaliso, ipilisi engummangaliso yempumelelo, kwaye ayinakuqondakala into yokuba besingafundanga sonke kwesi sifundo sibalulekileyo ukusuka kwibanga lokuqala.
Yiyo loo nto ndibhalele le ncwadi ndenzela wonke umntu obe njengam, ozamile ixesha elide kodwa engahambeli phambili njengoko bafuna kwaye befanelekile.
In "Intlonipho - impumelelo ilula kakhulu" ndikubonisa ifomula yomlingo, ndikubonisa ukuba kuhlala kulula kwaye kulula ukufikelela phezulu, kwimpumelelo yakho ejikelezayo kunye nokunceda wonke umntu.
Cela incwadi yasimahla ngoku
Isebenza njani imbeko, kulula ukuba sizise intlonipho kubo bonke ubudlelwane kunye nokuba uxabiso oluqinisekileyo nolukhawulezayo lusebenza njani-yile nto ndiyichazileyo encwadini.
Ukuba unjengam, uphelelwe ngumonde kwaye uzimisele, kwaye ujonge impumelelo, ngoko ukuqeqesha kunokuba yinto nje kuwe ... Xa umcebisi esecaleni kwethu, ayikhawulezi nje kwaye ilula, ifuna nokuzama okuncinci & impazamo.
Zifumanele kwisicwangciso samahhala semizuzu engama-45 sokuthetha nam. Ixesha yimali, batsho. Kodwa ngaphezulu koko, kukho iindleko zamathuba, iindleko zokungahoyi, ukulibaziseka, ukufika emva kwexesha, i-ergo yokulahleka. Iindleko ongaziboniyo nokuzazi kwaye ekugqibeleni zisibize kakhulu.
Fumana ukuqeshwa simahla okulandelayo kunye nam kwangoko-ndijonge phambili kuyo!
Imizuzu engama-45 yasimahla. Bhukisha intlanganiso yeqhinga
Ngaba ungusomashishini, umntu ozimeleyo okanye ingcibi?
Ngaba usebenza kakhulu kwaye uphupha ngokuba nomoya ongaphezulu?
Ngaba unqwenela ukufumana amaxabiso angcono kunye nemirhumo ephezulu yeenkonzo zakho eziphezulu kwintengiso?
Okanye ngaba ufuna izinto zibe lula, zibengcono kwaye zonwabe?
Emva koko kuya kufuneka uyeke owona mkhosi womeleleyo phaya usebenze-endaweni yokuba ubeke amandla angapheliyo kwimisebenzi yakho.
Ndithetha ngentlonipho. Ukunyaniseka, intlonipho yokwenene kuwe nakwindawo ekungqongileyo. Uya kumangaliswa yinto eqhubekayo. Kulula, ngokukhawuleza nangcono ...
Bambalwa kuphela abayiqondileyo.
Intlonipho sisitshixo- kwaye kufuneka uyisebenzise ngoku. Ukulungiselela abathengi bakho, usapho kunye nawe.
Intlonipho yeyona nto iphantsi kuluntu lwethu. Sifunde okuncinci ngayo esikolweni, singasathethi ke ngokuqonda ukuba singayisebenzisa njani imbeko kubomi bemihla ngemihla ukuze kuzuze wonke umntu obandakanyekayo.
Ndakuqaphela oku nam kuphela emva kweminyaka emininzi ndisemsebenzini, kwaye unkosikazi wam wayengaphezulu kwesihlandlo esinye kokubeleka kunye nokuqeqesha ngam ngaxeshanye.
Kwaye into emangalisayo kukuba: ulwazi lulodwa alwanelanga.
Nditsho nasemva kokuba ndikholelwe ukuba ndiyawuqonda umxholo, kusathatha iminyaka yokuziqhelanisa kunye nokusetyenziswa ukufumana iinkcukacha ezininzi malunga nokuxabisa kunye nentlonipho, kunye nokuqonda inkqubo engasemva kwayo.
Wonke umntu angenza okufanayo, azifumanele-kwaye atyale isiqingatha sobomi bobuchwephesha ngayo ...
Kodwa ukuba awunamonde, unomdla, kwaye ulambile, njengam, ndingavuya ukukubonisa isaci. Kulula kakhulu ...
njengabantwana abancinci: yenze kuqala-ke uqonde.
Kwaye into onokuyenza, inyathelo ngenyathelo, ndiza kukubonisa kwaye ndingavuya ukukukhapha. Ukuba uyathanda. Izimanga ziqinisekisiwe, impumelelo ezenzekelayo ayifakwanga ngaphandle.
Bhalisela isicwangciso samahhala sokuthetha nam kwaye masibone ukuba kuqhubeka ntoni ngawe. Ndijonge phambili ukukwazi ngokwakho.
I-JT Foxx Chicago-Intlonipho sisiseko sawo onke
Hayi 1 umqeqeshi weshishini, usomashishini osisigxina, ukuthengisa izindlu nomhlaba kunye nomtyali mali wabucala, i-JTFoxx kumandla wentlonipho kunye namava akhe neJuergen kumsitho weentsuku ezi-5 zeshishini eLondon.
UPatrick, usomashishini oselula, uqeqesho lwe-8: 1 iiveki ezisibhozo.
Ndifumene imida yam, ndaphinda ndabeka umgqaliselo kum, ndonyusa ukuzithemba kwam, ndafumana iindlela ezintsha ndaza ndazisa ishishini phambili. Bekufanelekile, kucetyiswa.
Irem, umfundi wezomthetho kunye nentengiso yexesha elizayo kunye nosomashishini osasazo kwezentlalo malunga nokusondeza ukuqeqesha kunye noJuergen, embindini wexesha laseCorona.
Amazwi aMazwe ngaMazwe ngeNhlonipho
Udliwanondlebe ku- "Hlonipha" kwihlabathi liphela ngo-2019 nango-2020.
UFred Fishback, u-CEO weJavelin Industries-Intlonipho
Intlonipho-yinto ebaluleke kakhulu kwaye iyafuneka namhlanje.
Umxholo wentlonipho usisiseko, yile nto kufuneka ube phantsi kolawulo kuqala.
Sifuna ukulula kwale ngcamango.
Ndicinga ukuba ukwinto ebaluleke kakhulu kwaye ndonwabe kakhulu yile uyenzayo iJuergen.
Intlonipho sisiseko sobudlelwane bethu,
imbeko sisiseko sokuzithemba,
imbeko sisiseko sokukhula okongezelelekileyo.
Ndonwabile kakhulu yile uyenzayo, ngumbono onamandla kakhulu.
Ingqungquthela kwiLondon Law Society
Udliwanondlebe olufinyeziweyo malunga "neNtlonipho" kwiNkomfa yeShishini ye2020 eLondon's Law Society.
Intlonipho yodliwanondlebe neHilton London Metropole
Udliwanondlebe "Wentlonipho" Udliwanondlebe we-2020 eHilton London Metropole Lobby
Ndiyamtyala kakhulu, ubeka yonke into kwiiprojekthi zentliziyo yakhe, uvulelekile kwihlabathi kwaye akoyiki utshintsho, akoyiki mngeni ... Kwiinyanga ezintandathu endimazi ngazo, sele endincedile kakhulu kwindlela endicinga ngayo, uya kuphuma uhambe kunye nokudibanisa.
Ifoto © Juergen Wilke
Indawo yamalungu ene DigiMember